मनको कुरा – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
February 15, 2018 February 15, 2018 सरोकार संवाददाता
हो सबैले मान्दै आएको छ मनको पिडा र ब्यथालार्ई । नमानौ पनि कसरी ? मानव जगतमा श्रृष्टि भएर धर्तिमा पाईला टेकेको पहिलो दिनदेखि नै रुदै जीवनको सुरुवात गर्ने प्राणी मानिस पनि हो । जव मानिसमा रुने गुण हुन्छ भने हास्ने वा खुसी हुने गुण पनि हुन्छ । हो यस्तै प्रकृयामा मानिस कहीले खुसी त कहले दुु खी हुने गर्दछ । कुनै एक ब्यक्ती आफ्नो लक्ष्यलाई पक्षाउदै जव दौडन सुरु गर्छ त्यसदिन देखि स्थायी रुपमा त्यस मानिसको जीवनमा कहीले खुसी त कहीले दु खी हुने समय बाराम्बार आईरहन्छ । हो मानिसको जीवनको यहि प्रकृया नै आत्मा ब्यथा हो । जहाँ प्रसव पिडा संगै हजारौ सोच र बुझाईहरुको जन्झीर रहेको हुन्छ । एत्तिले मात्रै कहा आत्मा ब्यथाको अर्थ अन्त्य हुन्छ र ? मानिसको गुण नै यस्तो हुन्छ कि थोरैले नपुग्ने धेरैले नथाक्ने सबै चिजमा लोभ मात्र गरिरहन्छ । जव मानिस आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तर्फ उन्मुख हुन्छ तब आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्दै लोभको दुनियाँमा फसाउदै जान्छ ।
मानिसको आत्माले के सम्म चाहान्छ त ? हरेक चिजमा आफ्नो स्वामित्व रहोस, हरेक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका रहोस भन्ने चाहान्छ । मानिको मन भन्नुनै उस्को आत्मा हो । मानिसमा एउटा एस्तो गुण हुन्छ आत्माले जे चाहान्छ ऊ उतैतिर ढल्किन्छ । जव मनमा खिन्न हुन्छ तब मानिस निरास हन्छ । जव मनमा खुसी हुन्छ तब उल्लाहास मनाउद छ । हो यस्तै यस्तै प्रबित्तिका हुन्छन मनका कुरा । मानौ एकजना ब्यक्ति सिनेमा हेर्न सिनेमा हल पुग्छ र सिनेमा हेर्छ । तब उस्लाई पनि यस्तो लाग्दछ कि म पनि यो सिनेमाको हिरो जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो । त्यसैगरी उक्त ब्यक्ति एउटा राजनैतिक समारोहमा पुग्दछ तब उस्को मनमा यस्तो लाग्छ कि म पनि यस्तै भाषण गर्न सक्ने नेता बन्न पाए हुन्थ्यो । फेरी पनि मानौ उहि ब्यक्ति कुनै एक ब्यक्ति चित्र कोरीरहेको ठाउमा पुग्छ फेरी उस्ले सोच्न थाल्दछ मैले पनि यस्तै राम्रो चित्र कोर्ण सके कत्ति राम्रो हुन्थ्यो । हो यस्तै यस्तै कुराहरु मानिसका मनका कुराहरु हुन् ।
यस्ता उदाहरणहरु लाखौ लाख पेस गर्न सकिन्छ । उदाहरण खोज्न कुनै समय लाग्दैन । दुनियाँमा यस्तो कुनै ठाउ नहोला त्यहाँ मानिस पुगेको छैन । मानिसले आफ्नो हरेक ईच्छाहरु पुरागर्नको निम्ती हरेक दुख कस्ट गर्दै आफ्नो पाईला अगाडी बढाउने गर्दछ । मानिसको मनमा परिस्थिति अनुसार धेरैकुहरु खेल्ने गर्दछ । जव मनले म यस्तो गर्छु भनेर सोच्दछ तब ऊ त्यही सोचाई हनुसारको काम गर्न अग्रसर हुने गर्दछ । सायद मानिसमा सकरात्मक प्रवित्तिको सोचाई मात्रै आउने हो भने समाजमा कुनै पनि प्रकारको घट्ना घट्ने थिएन होला । तर मानिस एस्तो प्राणी हो जव आफ्नो ईच्छा पुरा गर्न अगाढी बढ्ने क्रममा सही र गलत नछुट्याईकन कदम चलाउने गर्दछ । सोही कारणले गर्दा समाजमा बिभिन्न घट्नाहरु घट्ने गर्दछ । जव समस्या हुन्छ तब मन दुख्छ । मानिसमा एस्तो आचरण हुन्छ आफुलाई मन नपरेको कुरा कसैले हजारौ पटक अनुरोध गर्दा पनि त्यस्लाई स्विर्कान मान्दैन तर आफुलाई मन परेको कुरा हजारौ जनाको मन दुखाएर भए पनि त्यस्लाई प्राप्ती गर्छ । हो यस्तै यस्तै हो मनका कुरा ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भोलि देशवासीका नाममा सम्बोधन